शरीरमा कुनै रोग भए नभएको थाहा पाउन यी १५ लक्षण छन कि छैनन ? - Aarthiknews
एजेन्सी । जो कोहिलाई पनि खुशी र स्वस्थ जीवन जिउने इच्छा सबैलाई हुन्छ । तर, डाक्टरसँगको परामर्श नगरी तपाईं आफू कत्तिको फिट वा रोगी हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ । धेरै प्रकारका रोगका बारे जानकारी राख्ने डाक्टरहरु कुनै व्यक्तिमा देखिने लक्षणले नै धेरै रोगको पहिचान गगर्ने विश्वास गर्दछन् । तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा थाहा पाउन यी १५ लक्षण तपाईको शरिरमा देखिएभने स्वास्थ्यमा केहि खराबी छ भन्ने जानकारी पाउनु हुने छ ।
१. छालामा परिवर्तन : एक व्यक्तिको स्वास्थ्यको स्तर छालाको गुणस्तरबाट पहिचान गर्न सकिन्छ । सामान्यतया धेरै मानिसहरूलाई अनुसारको समस्याहरू हुन्छ ।तर, छालामा देखिने यस्तो अनौठो परिवर्तनले अस्वस्थ हुनुको संकेत हुन सक्छ । खराब छाला तपाईंले खाइरहेको खानाको कारण छालाको गुणस्तर बिगार्नको कारण हुन सक्छ । यदि तपाइँ छालामा केही अनौंठो दागहरू देख्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले केही गलत छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
२. निन्द्रा : के तपाईं रातमा पर्याप्त सुत्नु हुन्छ ? स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै रहस्यहरू मानिसको निन्द्रासँग सम्बन्धीत हुन्छ । गलत प्रकारको खानपान, अत्यधिक क्याफिन खपत वा शरीरबाट पर्याप्त उर्जा नहुनाले निन्द्रा नआउन सक्छ । जुन तपाईंको शरिर अनफिट हुदै गएको ठूलो संकेत हो।
३. पिसाव तपाईले कहिले पिसाबको रंगका बारेमा गम्भिर भएर नियाल्नु भएको छ ? पिसावको रंगले तपाईंको स्वास्थ्यको बारेमा सचेत बनाउन सक्छ । डाक्टरका अनुसार सामान्यतया युरिनको रंग हल्का पहेलो हुनुपर्छ । साथै, पिसावबाट नराम्रो गन्ध आइरहेको छैन ? यदि गन्ध आएको छैन भने चिन्ताको विषय हुन सक्छ ।
४. सुख्खा ओठ : तपाईंले धेरै व्यक्तिहरूको ओठमा चिरा चिरा भइरहेको देख्न सकिन्छ । ती व्यक्तिहरुले ओठमा बारम्बार लिप गार्ड लगाइरहन्छन । जुन ड्राई ओठको समस्याको कारण हुन सक्छ । ओठको बारम्बार ड्राईनेस शरीरमा कुनै ठूलो समस्याको संकेत हुन सक्छ । डाक्टरका अनुसार ओठ फष्ने समस्या शरीरमा भिटामिनको कमीको कारण हुन सक्ने बताएका छन् ।
५. खराब नंग शरिरका आँखा, अनुहारको छाला जस्तै नंगको रगले पनि शरिरमा केहि विसञ्चो हुँदै गरेको संकेत गर्दछ । हात र खुट्टाका नंगमा अनौंठो रेखा, निशान देखिएमा अस्वस्थ हुने संकेत गर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । यदि शरीरमा कुनै गम्भीर रोगले घर त गरेको छैन भन्ने संकेत गर्छ ।
६.. शरीरको तापक्रम : हात र खुट्टा सधैं चिसो हुनु सामान्य होइन । सामान्यतया हाम्रो शरीरको तापक्रम सन्तुलनको अनुसार परिवर्तन हुन्छ । तर, यदि तपाईले आफ्नो शरिरको तापक्रम सामान्यभन्दा फरक सधै पाइरहनु भएको छ भने यहा क
ेहि गडबढी पक्कै छ । हात र खुट्टाको लगातार चिसोपन शरीरमा रगत सर्कुलेसनको समस्याका कारण हुन सक्छ ।
७. शरिर चिलाउनु : शरीरमा बारम्बार चिलाउने समस्या छ भने यसले पनि शरिरभित्र कुनै समस्याको संकेत गर्ने डाक्टरहरुको भनाइ रहेको छ । तपाईको शरीरमा बारम्बार चिलाइरहनु भनेको शरिरले कुनै एजर्लीको बारेमा जानकारी गराउने एउटा तरिका हुन सक्छ
८.उचाई कम हुनेः तपाईले मान्छेको उचाई कम भएको बारेमा सुन्नुभएको हुनुपर्छ, तर, के तपाईले कहिल्यै उचाई घटाउने बारे सुन्नु भएको छ ? अधिकांश व्यक्ति यसको बारेमा सोच्दैनन् । तर वास्तविकतामा हाम्रो उचाइ कम हुन सक्छ। वास्तवमा यो हड्डीसँग सम्बन्धित समस्या हो । हामी यहाँ थोरै व्यक्तिहरूबारे कुरा गर्दैछौं। जसको उँचाइ प्रोटीन र क्याल्सियम जस्ता महत्वपूर्ण पोषक तत्वहरूको अभावले कम गर्न सकिन्छ ।
९. खुट्टा सुन्निनु : रेडबुकको रिपोर्ट अनुसार शरीरको तल्लो भागमा खुट्टाले थाइरोइड, मिर्गौला वा मुटु सम्बन्धी समस्याहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ । तर, खुट्टा सुन्निनु भनेको शारीरिक गतिविधिको कारण मात्र हुनु आवश्यक छैन ।
१०. अनुहारमा चाउरीपन देखिनु : रेडबुकले दिएको रिपोर्ट अनुसार अनुहारको छालामा चाउरीपन देखिनु बुढेसकालको प्रक्रियाको एक हिस्सा हो । तर, घाममा नपरेका क्षेत्रहरूमा समयभन्दा पहिलेको चाउरीपन आउनु खराब स्वास्थ्यको संकेत हुन सक्छ । तपाईंको हातको माथिल्लो भागमा चाउरी परेको देख्नु भयो भने यो उच्च रक्तचापको समस्यातिर औंल्याउँछ ।
११. मुखको गन्ध : तपाइँको मुखबाट आउने गन्धले तपाइँको रोग प्रतिरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्ध राख्न सक्छ । मुखबाट गन्ध आइरहेको छैन भने यसको अर्थ तपाइँको प्रतिरक्षा प्रणाली धेरै राम्रो छ ।
१२. आँखामा पहेंलो रंगः डाक्टरहरूका अनुसार सधै आँखाको रंग सधैं सेतो हुनुपर्दछ । तर, यदि यो गाढा पहेंलो वा अन्य कुनै रंगको छ भने तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि त्यहाँ पक्कै समस्या छ । आँखा पहेंलो हुनु जण्डिसको समस्या पनि हुन सक्छ । जसले कलेजोलाई असर गर्छ ।
१३.. घाँटी सुन्निनु : एमएसएनको रिपोर्ट अनुसार घाँटी लगातार सुन्निरहनु शरिरमा गम्भीर समस्या हुन सक्छ भन्ने संकेत हाृ । यो ’ओभरएक्टिभ थाइरोइड’ को समस्या हुन सक्ने संकेत गर्छ ।
१४ मोटोपन : एक स्वस्थ्य शरीरको लागि फ्याट प्रतिशतको सन्तुलन हुनु अति आवश्यक हुन्छ । शरीरको बोसो प्रतिशत बढाउँदै जानेको मतलब तपाईंको शरीरमा लीन टिश्यूभन्दा बढी फ्याट टिश्यू बनिरहेका छन, जुन कमजोर मांसपेशिको कारणले हुन्छ । यस्तो समस्या दौडने, हिंड्ने वा कुनै प्रकारको शारीरिक गतिविधि नभएको कारण बढ्न सक्छ ।
१५ शारीरिक गतिविधिः के तपाईं लामो समयसम्म विना आराम हिड्न सक्नुहुन्छ ? के तपाईं आफ्नो भारी सामान रासन पसलबाट घरमा ल्याउन सक्नुहुन्छ ? के तपाईं खुट्टा नखुम्च्याइ आफ्नो घुँडा छुन गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईं एक खुट्टा मा शरीर सन्तुलन गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईं स्क्वाट्स लागू गर्न सक्नुहुन्छ? यदि यी प्रश्नहरूको जवाफ हो भने, तपाईं फिट हुनुहुन्छ ।